asalsashan » तिज – विगत र वर्तमान तिज – विगत र वर्तमान – asalsashan
तिज – विगत र वर्तमान
सुन न सुन स्वामी तिजको दिन छ भोलि
मकन किनिदेउ न धुपछाँयाको चोलि !
छमछम् गर्ने पाउजु, साठी हातको फरीया
मकन किनिदेउ न चुरा हरीया !
….. यस्तै भाका गुन्झिन्थे तिजमा ।
आकाशमा कालो बादल, सिमसिम पानी बर्षिराखेको बेला । बाबाको गैरा बारीमा सर्लक्क परेका हरिया मकै । बारीमा मकैसँगै बोडि, काँक्रा, फर्सिका मुन्टा । बारीको यौटा छेउमा बाँसको घारी, घारीमा भदौरे तामाका टुसा पलाएका । घरको गोठमा लैनोभैसी, मालिगाई बाँधेको । बाबाले गाबुभरी दुध दोएर, आमाले ठुलो कराईमा पकाएको खिर, सेलरोटी, झ्यानि खाजा, काँक्राको राइतो, आलु, तामा, हरियो गाबा, बोडिको तरकारी, भिन्डी, करेला, हरियो खुर्सानिको अचार, दहि, केरा । आहा त्यो बेलाको त्यो तिज, सम्झनामा आईरहन्छ ।
आँगनमा कति बर्षपछि भेट भएका वचपनका साथीहरु । ठुलि, माइली, साइलि दिदी र कान्छी बैनि । सबै रमाउँदै गितबाटै आआफ्ना दुःख, सुख ब्यक्त गर्दै नाँच्ने गाँउने । घरको पेटिमा, परालको गुन्द्रि । सबै बसेर दर खाने । तिजको दिन, बिहानै उठेर सबैजना मिलेर नजिकको नदिमा गएर स्नानगरी शुद्ध भएर रातो चूरा, पोते सारीमा गाँउमुलिको घरमा अथवा देवालयहरुमा सामुहिक गर्ने । पुजा सकिएपछि निर्जल बर्त बस्न नसक्नेहरुले फलार गर्ने र सक्नेहरुले गणेश चौथिको दिन सिदा पुर्न पात्रो गरेर सुर्यलाई जल चढाएर बर्त समाप्त गर्ने हाम्रो परम्परा, यादगर छ अझै ।
आज समयको साथसाथै तिज मनाउने तरीकामा पनि परिवर्तन आयको छ । त्यो बेला घरको आँगन र देवालयमा सामुहिक मनाउने तिज अचेल आर्थिकस्तर मिल्दो ग्रुप बनाएर ठुला होटल रेष्टँुराहरुमा भड्किलो तरीकाले मनाउँदै गरेको देखिन्छ । देखासिकी र महंगो गरगहनाले खर्चिलो र भड्किलो बनिरहेको छ । नहुँनेले ऋण कारेर पनि मनाउनु पर्ने अवस्था छ ।
मान्छे सामाजिक प्राणी हो । धर्म, संस्कृति, मेला, पर्व, बिहे, वर्तबन्ध जस्ता धर्म संस्कृतिहरु समाजलाई मिलायर राख्ने उत्कृष्ट माध्यम हुन् । त्यसैले हामीले यस्ता सामुहिक पर्वहरु मनाउँदा समाजका अरु व्यक्तिहरुलाई मर्का नपर्ने गरेर मनाउँदा आफन्त, समाज र देशमा अवश्य पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदछ ।
अहिले कोरोनाले सबैलाई थिलोथिलो पारेको छ । यस्तो बेलामा सामुहिक रुपमा नाच्ने, भिडभाड गर्ने, जम्मा भएर नाच्ने गाउँने अवस्था छैन । त्यसैले यसपालिको तिजमा हामी सबैले सरकारले जारी गरेका नीति निर्देशनको पालना गरौ, स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गरौ । तिज भड्किलो हैन, संस्कारी बनाउँ, आफन्तसँगै घरमै रमाउँ ।
– पुष्पा भट्टराई
वडा सदस्य, नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३, बाँके